အရသာကောင်းမကောင်းဝေဖန်နိုင်ဖို့ Seaside Taste ရဲ့ Review လေး – FoodiesNavi
အရသာကောင်းမကောင်းဝေဖန်နိုင်ဖို့ Seaside Taste ရဲ့ Review လေး
By yin sandi On May 11, 2018 0
Side Dish တွေစားနေရတာရိုးအီလာပြီး တစ်ပွဲလည်းမဝ နှစ်ပွဲသုံးပွဲလည်းအားမရနိုင်တဲ့ ? အက်မင်တို့လိုအစားတစ်လိုင်းတွေအတွက် ဗိုက်ကားသွားအောင်အပီဆွဲနိုင်မယ့် စားဖွယ်ရာအစုံစုံကို ဗန်းလိုက်ကြီးတွေနဲ့ ရောင်းချပေးနေတဲ့ဆိုင်တွေများလာတဲ့အထဲက အက်မင်သွားဖြစ်တဲ့ဆိုင်လေးအကြောင်း အစားတစ်လိုင်းတို့ကိုဖောက်သည်ချပေးချင်ပါတယ် ? အက်မင်သွားစားဖြစ်တဲ့ဆိုင်လေးကတော့ ပင်လယ်စာတွေနဲ့ ထိုင်းစတိုင်အထောင်းအသုပ်မျိုးစုံကို ရောနှောပြီးဗန်းကြီးတွေနဲ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ Seaside Taste ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးကတော့ လှည်းတန်းစင်တာဒုတိယထပ်မှာ တည်ရှိတာပါ။ ဆိုင်ကတအားကြီးမကျယ်ပေမယ့် ဘေးနံရံလေးတွေကို ပင်လယ်ပြာပြာလှိုင်းပုံစံအရောင်လေးတွေနဲ့ ဖန်တီးပေးထားပြီး ထန်းလျက်အမိုးပုံစံလေးတွေပါတွေ့ရတော့ ကမ်းခြေမှာပင်လယ်စာဗန်းကြီးတွေကို ထိုင်စားနေရတဲ့အလား တမျိုးလေးထူးခြားနေတယ်။
Menu ကိုကြည့်လိုက်တော့ ဗန်းလိုက်အားရပါးရကြီးတွေကို အမျိုးမျိုးအစုံစုံရောနှောပြီး ပြင်ဆင်ထားပုံတွေက မြင်တာနဲ့တင်သွားရည်ယိုချင်စရာကောင်းနေရော အက်မင်ကတော့ ဝက်သားသရဲမို့လို့ ဝက်ခေါက်ကြော်ပါတဲ့ဗန်းကြီးကိုရွေးမှာဖြစ်တယ်။ အက်မင်မှာဖြစ်တဲ့ဗန်းထဲမှာတော့ စပ်လန်ပြဲမာမားခေါက်ဆွဲထောင်း ၊ ဝက်ခေါက်ကြော် ၊ ကြက်သားကြော်၊ ပုဇွန်မုန့်နှစ်ကပ်ကြော် ၊ ပြည်ကြီးငါးကင် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ သခွားသီး ၊ ရုံးပတီသီး ၊ မုန်လာဥနီ ၊ ကြက်ဥ၊ ဆလပ်ရွက်တွေပါတယ်။ လာချပေးတာတော့ ဗန်းကြီးတွေနဲ့ပေမယ့် စားကြည့်လိုက်တော့သိပ်တော့ မဂွတ်ဘူးရယ် ? သာမန်အိမ်မှာကြော်စားတဲ့ ကြက်သားကြော် ၊ ပုဇွန်ကြော်တွေလောက်ပဲ။ ဝက်ခေါက်ကြော်ကလည်း သုံးထပ်သားကိုအိမ်မှာကြော်ထားတဲ့အတိုင်း ခပ်မာမာလေးပဲ ။ ပြည်ကြီးငါးကလည်းအာ့လောက်မထူးခြားလှဘူး ကင်ထားတယ်လို့တောင်မခံစားရဘူး ။ အဓိကက လှလှပပပြင်ဆင်ပြီးဆွဲဆောင်ထားပေမယ့် သာမန်အိမ်မှာချက်စားတဲ့အရသာလောက်ပဲဆိုတော့ ပေးရတဲ့ဈေး(၁၂၉၀၀)ကျပ်နဲ့ တွက်ကြည့်ရင်တကယ်မကိုက်ဘူး ။ BBQ အဝစားသွားတဲ့ဈေးလောက်ပေးရပြီး သာမန်အရသာလောက်ပဲရတော့ အက်မင့်အမြင်တော့ သိပ်မတန်ဘူးရယ်။ အက်မင်က Menu အကုန်မစားဖူးလို့လားတော့မသိ စားကြည့်တဲ့ဗန်းကတော့အထွေအထူးကြီးမဟုတ်ဘဲ မျှော်မှန်းထားသလောက်ဖြစ်မလာတော့ ဈေးလည်းမတန်ဘူးလို့ပဲမြင်တယ်။
ကင်းမွန်ဝက်သားအစာသွပ်ကတော့ လက်ရာလေးကထူးခြားပြီး ပုံစံလေးကလှနေပေမယ့် တော်တော်လေးငန်တယ်။ (၄)ခုတည်းကို(၆၀၀၀)ကျပ်တောင်ပေးရပြီး အရသာသိပ်မကောင်းတော့ သိပ်မကြိုက်လှဘူး ? သူငယ်ချင်းက ဝက်သားအစာသွပ်တွေငန်လို့ဆိုပြီး အစာတွေထုတ်ပစ်တာကို ကင်းမွန်အတွင်းလွှာလား အမှိုက်လားတော့မသိဘူး ? ပလပ်စတစ်အဖတ်ကြီးထွက်လာတယ်။
ကိုယ်စားသမျှထဲ စတော်ဘယ်ရီရှိတ်လေးတော့မဆိုးလှဘူး ။ စတော်ဘယ်ရီလေးကို အချိုတအားကြီးမထည့်ဘဲ ရှိတ်ထားတာလေးက ချဉ်ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ တော်တော်လေးသောက်လို့ကောင်းတယ်။ ဈေးနှုန်းကလည်း (၂၀၀၀)ကျပ်ဆိုတော့ အရသာနဲ့ပေးရဲ့တန်ဖိုးမဆိုးဘူးလို့ပြောရမယ်။
သီးစုံဒိန်ချဉ်ကတော့ Fun Hwa ဒိန်ချဉ်ဘူးထဲကဒိန်ချဉ်တွေကို ငှက်ပျောသီး ၊ လိမ္မော်သီး ၊ ပန်းသီးလေးတွေလှီးထည့်ထားတာဆိုတော့ အက်မင်ကတော့ သိပ်သဘောမတွေ့ဘူး ။ ပုံစံလှပေမယ့်အရသာက မဆွဲဆောင်နိုင်ရင် ခံတွင်းတွေ့ဖို့မလွယ်ကူဘူး ? အကုန်လုံးကအက်မင့်အမြင်သက်သက်မို့ ခံစားချက်ချင်းမတူခဲ့ရင်လည်း ဝေဖန်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်။ နောက်ထပ်လည်း Foodies Navi ကနေ နောက်ထပ်စားသောက်ဆိုင်တွေကို သွားရောက်သုံးဆောင်ကြည့်ပြီး အကောင်းအဆိုးတွေ အမှန်အတိုင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Foodiesnavi Page လေးကို Like လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် ?
စားဖွယ်ရာတွေစုံလင်များပြားလှသလို ဓာတ်ဖမ်းလို့လည်းကောင်းတဲ့ Kafe In Town
ဆီရှောင်ပြီးချဉ်ချဉ်စပ်စပ်အသုပ်လေးတွေသုပ်စားချင်တဲ့ အစားတစ်လိုင်းတို့အတွက် …..